septambra 2019 eny amin’ny kianja sentetikan’i Vontovorona, ny CNaPS Sport Madagasikara araka ny filazan’Andriambololona Tipeh mpanazatra azy. Ekipa azo resena tsara ny Ts Galaxy Fc, hoy izy, raha tarafina tamin’ny lalao mandroso natao tany amin’ny kianja “Mbombela Stadium” Afrika Atsimo tamin’ny 15 setambra lasa teo. Mbola tao anatin’ny fifantoana tanteraka ary tsy tafiditra tsara tamin’ny lalao ireo mpilalaontsika no nahafaty an’iny baolina tokana nandreseny iny ry zareo Afrikana Tatsimo ka somary nampiova be ihany ny fizotran’ny lalao izany nony avy eo sady nisy ihany koa an’ireo baolina roa matintsika fa nolavin’ny mpitsara hatrany. Fantatra ankehitriny fa ao amin’ny heriny tsara avokoa ireo mpilalaon’ny Cnaps Sport rehetra afa-tsy i Lalaina izay naratra kely nandritra ny fanazaran-tena natao. Marihana fa i Lalaina dia anisan’ireo mpilalao tompon-toerana niaraka tamin-dry Leda, Ando, Toby, Tantely, Ronald, Tojo, Fortunat, Eric, Remy ary Arnauld tamin’ny lalao mandroso tany Afrika Atsimo.
Ny CNaPS Sport Madagascar tany amin’ny kianja “Mbombela Stadium” Afrika Atsimo